५ वटा अप्रेशन त्यागेर डाक्टरलाई विफल पार्दै पुगेकी आमा १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो ? कस्तो अचम्म (भिडियो सहित) |५ वटा अप्रेशन त्यागेर डाक्टरलाई विफल पार्दै पुगेकी आमा १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो ? कस्तो अचम्म (भिडियो सहित) – हिपमत
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पत्तिलाई कोरोना संक्रमण
५ वटा अप्रेशन त्यागेर डाक्टरलाई विफल पार्दै पुगेकी आमा १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो ? कस्तो अचम्म (भिडियो सहित)
म्याग्दी,पौष २।नेपालको म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट ८ किमी टाढा एउटा यस्तो प्राकृतिक उपचार केन्द्र अवस्थित छ जसको नाम सिंगा तातोपानी कुण्ड भनेर जानिन्छ। अजिब किसिमको बिरे नुनको गन्द आउने तातो पानी कसैले तयार पारिएको पक्कै पनि होइन तर यो चमत्कारी शक्ती जमिन भित्रबाट निस्कीएको हो । तातो पानीमा सल्फरको मात्रा पाइन्छ र यस पानीले रोगको किटानुलाई मार्दो रहेछ जसको तापक्रम ४८ डिग्री सेल्सिएस छ । यहा मानिसहरु देशका विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो शरीरको रोग निको पार्न आउने गर्दछन । एउटै कुण्डमा डुब्दा पनि एक विरामीमा भएको रोग अर्कोलाई सर्दैन भन्ने जानकारी पनि तातोपानी व्यवस्थापकहरुले स्कटनेपालको बिशेष कुराकानीमा जानकारी गराउनु भयो ।
बुधबार, पौष ०२, २०७६मा प्रकाशित गरिएको
फोर्ब्स म्यागाजिनको एसियाका प्रभावशाली ३० युवाको सूचीमा दुई नेपाली